Iyo Ibex 35 muchiitiko chekuzotevera: zvekuita? | Ehupfumi Zvemari
Hapana mubvunzo kuti indekisi inosarudzika yemabhizimusi eSpanish, Ibex 35, iri muchimiro chakateerana icho chakanetsa kubuda mumwedzi yapfuura. Inofamba pamatanho akapamhamha, pakati pe8200 uye 9200 mapoinzi anenge. Nekukwira uye kuderera zvichienderana nemazhinji misiyano inoshandiswa nemisika yemari. Ichi chokwadi chine mhedzisiro huru yekuti zvakanyanyisa kuomarara kwauri kuti uite nzira yekudyara. Ose ari maviri kutenga nekutengesa, uye nemabasa, ayo anovhura iwo mikana mune ako mashandiro pamusika wemasheya.
Aya maitiro ayo echokwadi ari kunetesa chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati vasingazive zvekuita nemari dzavanodyara. Uye kune atove nemwedzi yakawanda kuti mamiriro aya agara, pasina kuve nekuzorora neimwe nzira kana imwe. Uye chii chakanyanya kukosha, ne kufamba kushoma mukukwanisa kwayo kumusoro, sezvakaitika mukati memwedzi uno wapfuura waJanuary. Iko kukwira kwakamira chaiko pamatanho e9200 poindi.
Kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa nezve kukosha kwekutsvaga nzira yekubuda neiyi nzira yekupedzisira iyo equity iri kupfuura izvozvi. Nekuti kusvika panguva yacho imwe kana mamwe maitiro haana kutsanangurwa, kune mashoma mashoma marongero anogona kushandiswa nevashambadzi vadiki nepakati. Beyond yakanyanya kutaurwa uye yakaderera-kukosha mashandiro zvine chekuita nemipiro yehupfumi yezvibvumirano zvakaitwa.
1 Ibex 35: ine kamuri diki yekufambisa
2 Iyo Ibex 35 inotarisa pasi pe8.751
3 Chii chekuita nevekupedzisira?
4 Kuita zvechisimba zvakanyanya pakutanga
5 Bhizinesi pamusika wemasheya panguva 2108
Ibex 35: ine kamuri diki yekufambisa
Kubva pane ino mamiriro ese, zvakajairika kuti hauna kugadzikana kuita kuti mari yako iwane purofiti munguva dzino dzakakosha dzemisika yemari. Kwete pasina, zvinokwanisika mabhenefiti zvakanyanya kushomeka sezvo mafambiro aine mikana yekuwongorora ipfupi pane nakare Nekuti zviripo, panguva ino zvinonetsa kwazvo kuwana zvido zvavanoziva nemaviri manhamba. Kunze kweakateedzana ehunhu hwakakodzera mukati memusika wenyika unoramba uchienderera, uye izvo zvinogona kuita kuti uve nemari hombe yemari mukuita kunoitwa mumisika yemari.
Kune rimwe divi, uye nekupihwa kusava nechokwadi kwemisika yemari, hapana vashoma varidzi vemari vakatungamira mari yavo zvigadzirwa zvechivanhu zvebhengi nguva dzose. Ndokunge, kune yakatarwa-temu dhipoziti, akakwira-emubhadharo maakaunzi uye mune zvimwe zviitiko kunyangwe emakambani ekuvimbisa manotsi. Iyo ndeyechokwadi nzira yekuchengeta yako yehupenyu kuchengetedza uye mune ino kesi inofambidzana neiyo shoma purofiti iyo mune chero mamiriro akagadziridzwa mumwedzi yapfuura. Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chakanyatsojeka uye ichocho ndechekuti makambani madiki nepakati nepakati ane nguva yakaoma kwazvo kuita mari yavo panguva ino.
Iyo Ibex 35 inotarisa pasi pe8.751
Chinyorwa chakakurumbira mumazuva achangopfuura inyaya yekuti Ibex 35 yatove padyo chaizvo nematsigiro ainayo pamapoinzi mazana masere nemazana mashanu mushure mekurasikirwa nechikamu chikuru chemibairo yakaburitswa muna Ndira apfuura. Chero zvazvingaitika, gara uchienderana nemamiriro ekuderera emamwe misika yepasi rose. Imwe yeanokonzeresa yeiyi nyowani yemusika wemusika kuderera kuve kutonhora kwemweya wekutaurirana pakati China neUnited States. Ehe, pane zvikonzero zvishoma kwazvo zvekudyara mari mumusika wemasheya panguva ino chaiyo, kupfuura chaiko mashandiro.
Ichokwadi kuti havazi vese vaizove nhau dzakaipa uye nenzira iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo data kubva ChiGerman kutumira uye kupinza vanga vakanyanya kunaka kupfuura zvaitarisirwa. Kunyangwe ichiri chinhu chidiki diki chakakosha kuitira kuti mabhegi arambe achikwira kubva zvino zvichienda mberi. Beyond zvine musoro rebound izvo zvinoitika muzviitiko senge zvazvino uno. Iko, mumusika wechikwereti, iyo yekuSpain yengozi premium inokwira kusvika panosvika 115,90 hwaro hwenongedzo. Iyo rebound iyo isingazadze vashoma uye vepakati varimi vane kuvimba. Kana zvisiri, pane kudaro, inodyara kusahadzika mavari.
Chii chekuita nevekupedzisira?
Mune ino yakakosha maitiro mumisika yemasheya kutenderera pasirese, chokwadi ndechekuti pane vashoma vashambadziri vanogona kuita. Iva mazano mashoma kwazvo kuita ako makuru ekudyara nzira. Imwe yeakanyanya kukosha ndeyekutora mukana wekupisa kwemusika wemasheya emamwe emabhizimusi eSpanish. Nekuti mune ino pfungwa, haugone kukanganwa kuti misika yezvemari inogara ichigadzira mikana chaiyo yebhizinesi. Uye izvozvi hapana chikonzero chekumira kuve icho. Zvirokwazvo sezvazvakaitika mumakore akaomesesa kumusika wemasheya.
Mune imwe tsinga, haugone kukanganwa kuti kutora chinzvimbo mumusika wemasheya uine dzimwe vimbiso dzebudiriro mukushanda, hauzove nesarudzo kunze kwekuvhura nzvimbo munzvimbo yepazasi yeiyo lateral chiteshi matiri takanyudzwa. Sezvinei, dzakakomberedza 8200 mapoinzi, kunyangwe isu tichimhanyisa njodzi yekuti rutsigiro rwakakosha urwu runogona kukanganiswa. Uye mune izvo zviitiko, mhedzisiro yacho ichave isina kunaka kune nzvimbo dzakavhurika sezvo uchigona kuburitsa kurasikirwa kukuru muhomwe yako yekudyara. Kunyangwe panjodzi yakakomba yekusungirwa pamutengo wemakore nemakore.
Kuita zvechisimba zvakanyanya pakutanga
Ehezve, pane chinhu chimwe chiri chechokwadi, uye ndiwo maitiro kune ino yeparutivi mamiriro achave ane chisimba kwazvo. Mune imwe pfungwa kana imwe, ine kukwirira kwakasimba kwekusimudzira kana kwekutiza kweiyo bearish mune iyo kesi inobvumidza mashandiro kuti aitwe nemahombekombe ekuita. Zvakare kubva kunzvimbo dzepamberi sezvo iwe uchizokwanisa kubvumirana zvigadzirwa zvemari izvo zvinodzikira mumisika yequity zvinokunda. Semuyenzaniso, mari yekudyara mari, mvumo kana kutengesa chikwereti. Nebudiriro inonakidza kwazvo kana aya mamiriro akaitika pakupedzisira. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Kune rimwe divi, zvakakodzera kuonesa panguva ino, izvo zvichave zvakakosha zvikuru. mirira imwe nguva kusvikira maonero mumisika yemakambani ajeka. Ehezve, zano iri richave rakakodzera kuchengetedza nekuchengetedza yako mari pamusoro pevamwe kufunga kwechero mhando uye mamiriro. Iwe unogona kunge uri mune ino mamiriro mukati megore rino kana kutopfuura. Chero zvazvingaitika, ichi chiitiko chakasarudzika chatisina kumbobvira tasangana nacho kwenguva yakareba uye chinozivikanwa nenyaya yekuti zvinonetsa kushanda mumamiriro ezvinhu akashata akadaro kune vashoma nevapakati varimi.
Mupfungwa iyi, imwe yesarudzo inogona kumiririrwa ne yakatarwa misika yemari. Hazvishamise kuti mune yakatarwa mari, huwandu hwakatengeswa mugore rapfuura hwaisvika mazana maviri nemazana manomwe nemakumi manomwe neshanu emamiriyoni euros, ayo anomiririra 200.757% kupfuura mugore rapfuura. Kune rimwe divi, kondirakiti muna Zvita yakawedzera 45,1% zvichienzaniswa nenguva yakafanana yegore rapfuura nekuda kwekubvumidzwa kwemidziyo yenyika neyekunze. Muchirongwa chakanangana nevashambadziri vane chimiro chekudzivirira kana chekuchengetedza. Iko kuchengetedzeka kwemari yakasimwa kunokunda kumwe kufunga kwekuwedzera. Ichi ndicho chinangwa mukirasi ino yesarudzo dzekudyara mumusika wemasheya.
Bhizinesi pamusika wemasheya panguva 2108
VaSpanish Stock Exchange vakatengesa mukati mari yakasiyana-siyana 587.479 mamirioni euros muna 2018 mushure mekunyoresa mamirioni emamiriyoni e38.768 muna Zvita, ayo ari kuita ari 5,4% pasi paNovember uye 18,7% pasi pemwedzi mumwe chete wegore rapfuura. Huwandu hwekutaurirana kwemwedzi uyu hwaive 3,1 miriyoni, 15,8% pasi pemwedzi wapfuura uye 5,7% pasi paDecember 2017. Mune mamwe mazwi, a kuderera muhuwandu hwekushanda nevashambadziri vakatarisana nerimwe remakore akaomesesa emisika yemari. Nekushomeka kwakabuda pachena kunyanya mushure mekupedza makore mazhinji zvisingaonekwe.
Nekudaro, kune rimwe divi, hunhu hwakanaka hwave naMARF muchiitwa ichi hunokwezva. Nekuti zvazviri, huwandu hwenyaya nyowani dzakabatanidzwa mukutengesa muMARF muna Zvita dzakasvika mazana mazana manomwe nemakumi matanhatu emairi euros, izvo zvinomiririra kuwedzera kwe671% zvichienzaniswa nenguva imwechete muna 226. Iyo akaunganidza vhoriyamu Pakupera kwe2018 yaive mamirioni e6.357, mushure mekukura ne60,1% mugore.
Iyo yakatanhamara vhoriyamu iri kutenderera mumusika uyu yakasvika 3.320 mamirioni euros, inomiririra kukura kwegore rega kwe46,9%. Mune izvo zvakaumbwa, kune rumwe rutivi, seimwe yeakanakisa data mukati meiyo iri chikamu chekudyara mukati medu nyika. Sekupokana nehutera hunowanikwa mune yakasarudzika indekisi yemari yenyika. Nekushomeka kwakabuda pachena kunyanya mushure mekupedza makore mazhinji zvisingaonekwe nevamiriri vemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iyo Ibex 35 muchiitiko chekuzotevera: zvekuita?